July 2019 - Smart Education Centre
Cloze Type (Additional Exercise 3)
July 31, 2019 July 31, 2019 by Dr. Nay Aung Min
➡️ စာမေးပွဲတွင် Cloze Type မေးခွန်းများကို (၁၀)မှတ်အရင် ရအောင် ဖြေဆိုပါ
➡️(၁၀)မှတ်အထက်ရမှတ်သည် ကိုယ့်အမှတ်စုစုပေါင်းကို အမှတ်(၆၀)အထက် ကျော်စေနိုင်မည့် အမှတ်ဖြစ်သည်
➡️ လေ့ကျင့်နေစဉ်တွင် အမှတ်နည်းမည်ကို မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ လေ့ကျင့်မှုများလာပြီး ဖြေဆိုနည်းမှန်ကန်လာလျှင် အမှန်များလာပါလိမ့်မည်
✔️ ဤ မေးခွန်းသည် ခက်ခဲမှုအဆင့် 3/5 ရှိသည်
✔️ အနည်းဆုံး(၁၀)မှတ်ရ အောင် ဖြေဆိုသင့်ပါသည်
မရှင်းလင်းသည်များကို notes များကို ပြန်လေ့လာပြီး ပြန်လည် ဖြေဆိုသင့်ပါတယ်။
A new report says men who take vitamin E may reduce their chances of developing prostate cancer. Earlier studies have shown that vitamin E (1) (can, may) help reduce the risk of heart disease and strokes. The new study (2) (is) the first to suggest that the substance may (3) (reduce) the risk of major kind of cancer.
The study was (4) (done) by researchers at the American National Cancer Institute and the National Public Health Institute (5) (in) Finland. They (6) (reported, put, wrote) the results in the publication Journal of the National Cancer Institute.
Cancer (7) (of) the prostate gland is the (8) (most) common cancer among men. About 40,000 (9) (men) in the United States will (10) (die) of the disease this year.
This study involved more than 29,000 white men in Finland (11) (who) smoke cigarettes. The men (12) (were) divided into four groups.
One group (13) (took)akind of vitamin A called beta carotene. Another took 50 milligrams (14) (of) vitamin E. The third group took (15) (both) vitamin E and beta carotene. The fourth group were (16) (given)aharmless substance.
The beta carotene study ended three years (17) (later). The study showed that the men (18) (taking) beta carotene had (19) (an) increase risk of developing lung cancer. The searchers say it suggests that the beta carotene users (20) (were) about 16 percent more likely to development lung cancer than the other men.
Vitamin E သည် Subject အနည်း ဖြစ်သော်လည်း help တွင် (s) မထဲ့ထားသောကြောင့် ကွက်လပ်တွင် Modal Verb (can/may) ဖြည့်ရမည်။
The new study is the first
(Sub + (be) + N) = ဖြစ်သည်။
အရှေ့စာကြောင်းမှ vitamin E may reduce ကို ကြည့်၍ ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
The study was done by researchers
(be) + V3 = Passive Voice
လေ့လာမှုကို သုတေသနပညာရှင်များက လုပ်ခဲ့သည်။
made သုံးလို့ မရပါ
in + နိုင်ငံ
6. reported / put / wrote
အရှေ့တွင် ပါခဲ့သော A new report ကို ကြည့်၍ ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
Subject အနောက်တွင် Verb ပုံစံ ဖြည့်ရမည်။
ပြီးခဲ့သော အကြောင်းအရာကို ပြောသောကြောင့် Past Simple (V2) ဖြည့်ရမည်။
put / wrote တို့လဲ ဖြေနိုင်သည်
prostate cancer = Cancer of the prostate gland
the most common = အဖြစ်အများဆုံး
အရှေ့တွင် အရေအတွက် ပါသောကြောင့် ကွက်လပ်တွင် Noun ဖြည့်ရမည်။
အဓိပ္ပာယ်အရ men ဖြည့်ရမည်။
die of = ဒီရောဂါကြောင့် သေသည်
of ပါသော ကြောင့် suffer ဖြည့်လို့ မရပါ။
white men in Finland who smoke cigarettes.
ဆေးလိပ်သောက်သော Finland မှ လူဖြူအမျိုးသားများ
ခွဲခြားခြင်း ခံရသည်၊ (ခွဲလိုက်သည်)
ဤနေရာတွင် eat တို့၊ have တို့ သုံးလျှင် မသင့်တော်ပါ။
ဆေးသောက်ခြင်းကို take နှင့်သာ သုံးလေ့ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သော အကြောင်းအရာကို ပြောသောကြောင့် Past Simple (took) ဖြည့်ရမည်။
50 milligrams of vitamin E
အကြောင်းအရာ ၂ခု ကြားတွင် and ပါနေသောကြောင့် အရှေ့ကွက်လပ်တွင် both ထဲ့မှ အဓိပ္ပာယ် ပိုပြည့်စုံမည်။
both + N + and + N = ၂ခုလုံး
ပေးခြင်း ခံရသည် (သူတို့ကို ပေးလိုက်သည်)
three years later = ၃ နှစ် ကြာပြီးနောက်
after သုံးလို့ မရပါ သည် time ရှေ့မှာ နေပါသည်
Noun + Ving = လုပ်နေသော သူ ဟု အဓိပ္ပာယ် ရသည်။
the men taking beta carotene
beta carotene သောက်နေသော အမျိုးသားများ
eating / having တို့ ဖြေလို့ မသင့်တော်ပါ
an increase risk
a/an/the + Adj + N
the beta carotene users were about 16 percent
ဒီ research က ပြောပြီးအရှေ့ဝါကျများတွင် past tense သုံးထားသောကြောင့် were သုံးရပါမည်
S + (be) + preposition
Daily Vocab (12)
July 27, 2019 by Dr. Nay Aung Min
➡️ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က စာလုံးများများကျက်မှတ်ထားဖို့ မဟုတ်ဘဲ မှန်းဆနည်းသိဖို့ကို ရည်ရွယ်ပါတယ်
➡️ စာလုံးအသစ်များကို နေ့စဉ် ပုံမှန်တင်ပေးနေတဲ့ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ်ပြီး နေ့စဉ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်
➡️ ပေးထားသော ၀ါကျများကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ပါ
➡️ ၀ါကျအရ မေးထားသော (—– = ? ) စာလုံးကို မည်သည့်အဓိပ္ပာယ် နှင့် သုံးထားသည်ကို dictionaryကို မကြည့်ဘဲ အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းကြည့်ပါ
➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည်း စဉ်းစားကြည့်ပါ
➡️ ကိုယ့်စိတ်ထဲ အဖြေကို မှန်းဆပြီးရင် Hint ကိုနှိပ်ပြီး တိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
➡️ ရှေ့ဆက်သွားရန် Next ကိုနှိပ်ပါ
Daily Vocab (11)
Daily Vocab (10)
July 27, 2019 July 27, 2019 by Dr. Nay Aung Min
Daily Vocab (9)
Prepositions (Additional Exercise 5)
August 12, 2019 July 25, 2019 by Dr. Nay Aung Min
➡️Prepositions များကို အလွတ်မှတ်သည်ထက် ပုံမှန် လေ့ကျင့်သွားလျှင် ဖြေဆိုနည်းသိပြီး နားလည်လာပါလိမ့်မည်
➡️မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုပြီးလျှင် Finish Quiz နှင့် View Questions ကိုနှိပ်၍ အဖြေတိုက်နိုင်ပါသည်
We were late because (of) the rain.
because of + N = — ကြောင့်
Did you come to Hong Kong (by) air?
by air = လေကြောင်းဖြင့်
by land = ကုန်းကြောင်းဖြင့်
by water = ရေလမ်းဖြင့်
(On) warm days, we have lunch in the open air.
in the open air = အပြင်ဘက်တွင် (အဆောက်အဦးအတွင်း မဟုတ်)
on + နေ့၊ နေ့စွဲ
John is angry (with) Tom because he forgot to invite him (to) his party.
angry with + လူ
invite + လူ + to + နေရာ
We arrived (at) the front door (of) Helen's house (at) 8:00 exactly.
at + the front door = အရှေ့တံခါးမှာ
at + တိကျသော နာရီ
If you want tea, ask the waiter (for) it.
ask for + N = — တောင်းသည်
The ball is flat. Blow it (up), and then we can begin to play.
blow up = လေမှုတ်သည်
blow up သည် ဖောက်ခွဲသည် ဟုလဲ အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးရှိသေးသည်
They blow up the old building with dynamites.
A thief has broken (into) our house and stolen some money.
break into + N = — ထဲသို့ ဖောက်ဝင်သည်
A terrible fire burntalot of the houses (down).
burn down = မီးရှို့ / ပြာကျသည်
If you are going (into, to) town, please call at Mrs. Brown's house and get my basket (back) from her.
get + N + back = ပြန်ယူသည်
Categories Uncategorized Tags prep (AE) Leaveacomment
Prepositions (Additional Exercise 4)
July 25, 2019 by Dr. Nay Aung Min
I came here in 1970, and it is now 1985 so I have been here (for) 15 years.
for + ကြာချိန်
I came to London in 1970, and have lived here (since) then.
since then = အဲဒီကတည်းက
I don't know when Peter was born, but he's (about, around, over) twenty-five years old now, I think.
about / around + အချိန် = — ခန့်
over + အချိန် = — ကျော်
I've been here foraweek, and it hasn't rained at all (during) that time.
during + အချိန် = — အတောအတွင်း
John was here (from) Monday (to, until, till) Wednesday, but he's gone now.
from – to = မှ – အထိ
from – until / till = မှ – အထိ
since နဲ့ to / till / until တွဲသုံးလေ့မရှိပါဘူးဗျ
You must apologize (to) Mr.Smith (for) your behaviour last week.
apologize to + လူ
apologize for + အကြောင်းအရာ
We will go to Mandalay tomorrow. We will be there (till, until) Friday.
till / until + အချိန် = — အထိ
Peter was absent (from) school yesterday.
absent + from = — မှ ပျက်ကွက်သည်
Could you please add these numbers (up) and tell me how much they come to?
add + something + up = — ပေါင်းသည်
Joan is afraid (of) going out alone.
afraid of = —ကြောက်ရွံ့သည်
Tenses (Additional Exercises 4)
July 25, 2019 July 25, 2019 by Dr. Nay Aung Min
➡ လေ့လာထားပြီးသော Tenses (၁၂)မျိုး လုံးကို ဖြေဆိုရပါမည်
➡ စာမေးပွဲတွင် အဖြေများကို ရေးသားရာတွင် အတို (Short Form) မရေးပါနှင့်
➡ ( I don’t know )
✅ ( I do not know )
➡ Exercise ကို ဖြေပြီးလျှင် Finish Quiz နှင့် View Questions ကိုနှိပ်ပါ။ အဖြေမှန်၊မှားနှင့် ရှင်းလင်းချက်များ ပေါ်လာမည်
➡ Tenses များကို ဖြေဆိုရာတွင် အောက်ပါ အချက်များကို သတိပြုပါ
➡ 1. ကွက်လပ်တွင် ဖြည့်မည့် Verb ၏ အချိန်ကာလနှင့် အဓိပ္ပာယ်အရ သုံးရမည့် Tense ကို ရွေးခြယ်ပါ။
➡2.Subject နှင့် ဖြည့်ရမည့် Verb ကို ကြည့်၍ Active (သို့) Passive စဉ်းစားပါ။
➡3. ရှေ့မှ Subject အနည်း၊ အများ ကို ကြည့်၍Subject – Verb Agreement ညှိပါ။
What you (do) (have you done) to my cassette? It's not working.
is not ပါသောကြောင့် Present Tense ဖြစ်သည်။
မင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲ ဟု ဆိုသောကြောင့် အရင်ဖြစ်သော အဖြစ်အပျက်ကို Present Perfect (have + V3) ဖြင့် ဖော်ပြရမည်။
The coffee (smell) (smells) wonderful.
Present Simple (Sub အနည်း) (V1 + s,es) ကို သုံးရမည်။
He (discover) (discovered) too late that he (make) (had made)abig mistake.
သူအမှားကြီးလုပ်မိတာ နောက်ကျမှ သိတယ်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။
အရင်ဖြစ်သော အဖြစ်အပျက်ကို Past Perfect (had + V3)
နောက်ဖြစ်သော အဖြစ်အပျက် ကို Past Simple (V2) ဖြင့် ရေးရမည်။
I was just about to leave when I (remember) (remembered) my briefcase.
was ပါသောကြောင့် Past Tense ကိုသုံးရမည်။
Where (these photographs/take) (were these photos taken)? In London? (you/take) (Did you take) them, or somebody else?
ဒီဓါတ်ပုံတွေ ဘယ်မှာ ရိုက်ခဲ့တာလဲ။ မင်းကိုယ်တိုင်လား တစ်ခြားသူရိုက်ပေးတာလား။
ပြီးခဲ့သော အဖြစ်အပျက်ကို ပြောသောကြောင့် Past Tense သုံးရမည်။
Sometimes it's quite noisy living here, but it's notaproblem for me, I (not/bother) (am not bothered) by it.
အရှေ့တွင် ပေးထားသော Verb အရ Present Tense သုံးရမည်။
အဓိပ္ပာယ်အရ Present Simple Passive (am/is/are + V3) ဖြင့် ရေးရမည်။
bother = နှောက်ယှက်သည်
I am not bothered = ငါ့ကို အနှောက်အယှက် မပေးပါဘူး / ငါအနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး
The baby (sleep) (has been sleeping) since five o'clock this morning.
since five o’clock ပါသောကြောင့် Present Perfect Continuous (has/have been + Ving) မှန်းသိရမည်။
While I (take) (was taking)abath, I heard the door bell (ring) (rang).
ငါ ရေချိုးနေတုန်း ခေါင်းလောင်းမြည်သံ ကြားခဲ့သည်။
while ပါသောကြောင့် Continuous Tense မှန်း သိရမည်။
နောက်ဝါကျသည် (see/hear + Obj + Vinf) ပုံစံဖြစ်သည်။ တစ်ခုခု လုပ်နေတာ မြင်လိုက်၊ကြားလိုက်တယ် ဟုရေးလျှင် သုံးသည်။
She no longer (wear) (wears) the dull colours of her former life and now (dress) (dresses) in bright,fashionable clothes.
no longer = နောကျထပျမလုပျတော့
now ပါသောကွောငျ့ present tense သုံးပွီး ဖွရေပါမညျ
သို့သျော she is dressing ဟု continuous တော့ သုံးလို့ မသငျ့တျောပါ
အမူအကငျြ့ကိုပွောသောကွောငျ့ Present simple နှငျ့ဖွပေေးရပါမညျ
He suddenly (realize) (realized) that he (dial) (had dialled, had dialed) the wrong number.
ရုတ်တရက် သူ နံပါတ်မှားခေါ်မိတာ သိလိုက်တယ်
Tenses (Additional Exercises 3)
As soon as the plane took off, I (realize) (realized) that I (leave) (had left) my suitcase behind.
took ပါသောကြောင့် Past Tense ဖြစ်သည်။
နောက်ဖြစ်သော အဖြစ်အပျက် ကို Past Simple (V2) ဖြင့် ရေးရမည်
took ပါသောကွောငျ့ Past Tense ဖွဈသညျ
အရငျဖွဈသော အဖွဈအပကျြကို Past Perfect (had + V3)
နောကျဖွဈသော အဖွဈအပကျြ ကို Past Simple (V2) ဖွငျ့ ရေးရမညျ
When he looked for his purse, he found that it (steal) (was stolen, had been stolen).
looked ပါသောကြောင့် Past Tense ဟု သိရမည်
အခိုးခံလိုက်ရသည် ဟုဆိုလိုသောကြောင့် Passive Voice နှင့် ရေးရမည်
Past Simple Passive (was + V3) သို့မဟုတ် Past Perfect Passive (had been + V3) ၂မျိုးလုံးသုံးနိုင်သည်
looked ပါသောကွောငျ့ Past Tense ဟု သိရမညျ
အခိုးခံလိုကျရသညျ ဟုဆိုလိုသောကွောငျ့ Passive Voice နှငျ့ ရေးရမညျ
Past Simple Passive (was + V3) သို့မဟုတျ Past Perfect Passive (had been + V3) ၂မြိုးလုံးသုံးနိုငျသညျ
Lend me your eraser. I (make) (have made)amistake.
မင်းခဲဖျက် ငါ့ကို ငှားပါ။ အမှားရေးမိလို့ ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောကြောင့် Present Perfect (have + V3) ကိုသုံးရမည်
မငျးခဲဖကျြ ငါ့ကို ငှားပါ။ အမှားရေးမိလို့ ဟုအဓိပ်ပာယျရသောကွောငျ့ Present Perfect (have + V3) ကိုသုံးရမညျ
(you,eat) (Have you eaten) anything?
အချိန်ပြပုဒ်မပါဘဲ မင်း စားပြီးပြီလားဟု မေးသောကြောင့် Present Perfect Question form ( Have + S + V3) ကိုသုံးရမည်
အခြိနျပွပုဒျမပါဘဲ မငျး စားပွီးပွီလားဟု မေးသောကွောငျ့ Present Perfect Question form ( Have + S + V3) ကိုသုံးရမညျ
It (rain) (has been raining) for two hours and the ground is too wet to play on. So the match (be) (is, has been) postponed.
the ground is too wet တွင် is ပါသောကြောင့် Present Tense မှန်းသိရမည်။
for two hours ပါသောကြောင့် ၂နာရီကြာအောင် မိုးဆက်တိုက်ရွာနေသည် Present Perfect Continuous (has been + Ving) ကိုသုံးရမည်။
မိုးရွာနေလို့ ပွဲဖျက်လိုက်ပြီဟု ဆိုသောကြောင့် Present Simple Tense သို့မဟုတ် Present Perfect Tense ကိုသုံးရမည
the ground is too wet တှငျ is ပါသောကွောငျ့ Present Tense မှနျးသိရမညျ
for two hours ပါသောကွောငျ့ ၂နာရီကွာအောငျ မိုးဆကျတိုကျရှာနသေညျ Present Perfect Continuous (has been + Ving) ကိုသုံးရမညျ
မိုးရှာနလေို့ ပှဲဖကျြလိုကျပွီဟု ဆိုသောကွောငျ့ Present Simple Tense သို့မဟုတျ Present Perfect Tense ကိုသုံးရမညျ
He (find) (found) out that his close friends (cheat) (had cheated) him.
While I (play) (was playing) the piano,she (write) (was writing)aletter.
while ပါသောကြောင့် Continuous Tense မှန်း သိရမည်
ငါ piano တီးနေတုန်း သူမ စာရေးနေခဲ့သည် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်
while ပါသောကွောငျ့ Continuous Tense မှနျး သိရမညျ
ငါ piano တီးနတေုနျး သူမ စာရေးနခေဲ့သညျ ဟု အဓိပ်ပာယျရသညျ
I (remember) (will remember) this day all my life.
ဒီနေ့ကို ငါတစ်ဘ၀လုံး အမှတ်ရနေတော့မှာ ဟုဆိုလိုသောကြောင့် Future Simple (will V1) ကိုသုံးရမည်
will be remembering လို့ ဖြေမရပါ
ဒီနကေို့ ငါတဈဘဝလုံး အမှတျရနတေော့မှာ ဟုဆိုလိုသောကွောငျ့ Future Simple (will V1) ကိုသုံးရမညျ
will be remembering လို့ ဖွမေရပါ
We can't watch TV because it (repair) (is being repaired) now.
now ပါသောကြောင့် Present Continuous မှန်းသိရမည်။
TV ကို အခု ပြင်နေသည်ဟု ဆိုလိုသောကြောင့် Passive (is + being + V3) ကို သုံးရမည်
now ပါသောကွောငျ့ Present Continuous မှနျးသိရမညျ
TV ကို အခု ပွငျနသေညျဟု ဆိုလိုသောကွောငျ့ Passive (is + being + V3) ကို သုံးရမည်
Here (be) (are) the notebook and report that I promised you last week.
ဒီမှာ အရင်အပတ်က ငါကတိပေးထားတဲ့ notebook နဲ့ report ပဲဟု ဆိုလိုသည်
promised နှင့် last week ပါသော်လည်း ၀ါကျ၏ အဓိပ္ပာယ်အရ Present Simple သာဖြစ်ရမည်
notebook and report ၂ခုပါသောကြောင့် Verb to be (basic form) အများ = are ဖြစ်ရမည်
ဒီမှာ အရငျအပတျက ငါကတိပေးထားတဲ့ notebook နဲ့ report ပဲဟု ဆိုလိုသညျ
promised နှငျ့ last week ပါသျောလညျး ဝါကြ၏ အဓိပ်ပာယျအရ Present Simple သာဖွဈရမညျ
notebook and report ၂ခုပါသောကွောငျ့ Verb to be (basic form) အများ = are ဖွဈရမညျ
Tenses (Additional Exercises 6)
July 31, 2019 July 23, 2019 by Dr. Nay Aung Min
Tenses M (3/14)
Oh! I (get) (am getting) on well with everything.
ငါ အဆင်ပြေနေတယ် ဟု ဆိုလိုသောကြောင့် Continuous Tense [(be)+V3] ကို သုံးရမည်။
He is too stupid. He (always,make) (is always making) the same mistake.
အမြဲ အမှားလုပ်နေတာပဲ ဟု အပြစ်တင်ပြောဆို သောကြောင့် Present Continuous (is + Ving) ဖြင့် ရေးရမည်။
The postman (bring) (brings) the mails twiceaday.
twiceaday တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် ဟု လုပ်လေ့ရှိသော အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြသောကြောင့် Present Simple (V1) ကိုသုံးရမည်။
How much (I, owe) (do I owe) you?
အချိန်ပြပုဒ်မပါသောကြောင့် Present Simple အမေးပုံစံ ( Do + S + Vinf) ကိုသုံးရမည်။
Miss Ella (not give) (is not giving, will not give)alecture today.
today ပါသော်လည်း Present Simple (V1) ဖြည့်လျှင် စာမသင်ဘူး ဟုသာ အဓိပ္ပာယ်ထွက်လိမ့်မည်
ဒီနေ့ သူ စာသင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောကြောင့် will +V1 နှင့် ရေး၍ ရသည်
Certain event in Future (is/are + Ving) ဖြင့် ရေးလျှင် ပိုသင့်တော်သည်
It'sabig factory. Five hundred people (employ) (are employed) there.
အဓိပ္ပာယ်အရ Passive Voice [(be)+V3] မှန်းသိရမည်။
Don't put the dictionary away. I (use) (am using) it.
ငါသုံးနေတယ်၊ ဖယ်မထားနဲ့ ဟုဆိုသောကြောင့် Present Continuous [(be)+Ving] နှင့် ဖြေရမည်။
I (see) (am seeing, will see) the manager tomorrow morning.
tomorrow ပါသောကြောင့် Future Tense မှန်းသိရမည်
Future Simple (will + Vinf) ဖြင့် ဖြေနိုင်သည်
Near Future [(be)+Ving] နှင့်လည်း ဖြေနိုင်သည်
သေချာသော အကြောင်းအရာဖြစ်သောကြောင့် Certain event in Future (is/are + Ving) ဖြင့် ရေးလျှင် ပိုသင့်တော်သည်
It (not rain) (does not rain) very much in summer.
အမြဲ ဖြစ်သော အကြောင်းအရာကို ပြောသောကြောင့် Present Simple (do/does + not + V1) နှင့် ဖြေရမည်။